IINWELE ZEENWELE EZINGAMA-40 ZEENWELE EZITHE TYE - IINGCAMANGO ZENDODA ZENDODA - UHLOBO
Iinwele ze-40 zamadoda zeenwele ezithe tye - Iingcamango zeNdoda zeNdoda
Amadoda aneenwele ezithe tye kwakudla ngokuba nzima ukufumana isitayile esifanelekileyo, kodwa ikhonkco lokufa lobudoda bobugqwirha ekugqibeleni luchaza ukuqala kweembonakalo ezintsha ezintle.
Abafana ngoku bavunyelwe ukuba benze nantoni na ngeenwele zabo ezithe nkqo, kwaye olu luhlaziyo olwamkelekileyo kwifashoni kuye wonke umntu.
Kwixesha elidlulileyo, ukungangqinelani kweenwele ezithe nkqo kwafumana udumo kubunzima kwindawo yesitayile, kodwa ngoku ubukhulu yinto ekufuneka yamkelwe endaweni yokuthintelwa. Kungenxa yokuba iimveliso zokuzilungisa zanamhlanje zihambele phambili ngokukodwa, kwaye izazinzulu ziye zagqwesa ekunikezeleni ulawulo oluphezulu kweyona follicles.
Ngenxa yemigangatho yenkulungwane yama-21 kunye nonyango, abafana banokuphela bekhula ngaphandle koxinzelelo ukusonwabisa sonke. Oku kuphawula i-zenith entsha yesibheno esithandekayo sokuziphatha ngesondo phakathi kweenkosi. Olunye uncedo lokusikwa okuphononongwe apha ngezantsi kukuba kusebenza kuyo yonke iminyaka. Ngelixa ezinye iindlela ezithandekayo zingcono zishiyelwe ulutsha, ezi zinto zidaliweyo ze-savvy zezona zinto zibalaseleyo zokuvuthwa.
Ngesikhokelo sethu sokusikwa kweenwele okuthe tye emadodeni, unokuziqonda nezona bristles zinenkani. Zama enye yezi zinto zilandelayo ukubetha ukhuphiswano lwakho ngelixa ufumana amanqaku aphambili kubantu besini esahlukileyo.
imibuzo ukubuza intombazana oyithandayo
Iingelosi zamaphiko itattoo ezingalweni
isiseko kunye nemibono yokuhombisa ucango
Izimvo zepatio kuhlahlo-lwabiwo mali